Usuhlehlisiwe umcimbi kaTshatha obulindwe ngabomvu
UHLEHLISIWE umcimbi wokuhambisa umembeso wesilomo somsakazo woKhozi FM, uKhathide “Tshatha” Ngobe obezombesa ingoduso yakhe, uS’bongimpilo Sikhosana eMnambithi ngempelasonto Isithombe: INSTAGRAM/ MCTSHATHA
S'MANGELE ZUMA | March 23, 2020
UKUBHEDUKA kwegciwane iCorona sekuholele ekutheni isilomo somsakazi woKhozi FM, uKhathide “Tshatha” Ngobe sihlehlise umcimbi wokumbesa ingoduso yaso, uS’bongimpilo Pepi Sikhosana.
Umcimbi obubhekwe ngabomvu, bekulindeleke ukuthi ube kubo kaS’bongimpilo, eLamehill, eMnambithi ngempelasonto kaMashi 28.
Izimemo zomcimbi kuthiwa bese zivele ziphumile ezihlotsheni nabangani bezithandani zombili.
Ethintwa uTshatha, uthe bakhulumile bewumndeni wakwaNgobe nakwaSikhosana, babe sebenquma ukuthi umcimbi uhlehliswe.
“Sesixoxile nabantu ebesibaqashile ukuthi basilekelele ukwenza umcimbi ube yimpumelelo ngoba bese kukhokhelwe zonke izinto.
Ngenxa yesimo salolu bhubhane, akukho esingakwenza,” kusho uTshatha. Uthe izimenywa sebezithumelile umyalezo ozazisayo ngokuhlehliswa komcimbi wabo.
UTshatha ube esethumela umyalezo othunyelelwe izimenywa, obuchaza ngokuhlehla komcimbi. Umyalezo ubuxolisa kwabakade sebezilungiselele ukuhambelo umcimbi.
Ukubeka kucace ukuthi umndeni wakwaNgobe nowakwaSikhosana inqume ukuwuhlehlisa umcimbi ukuthobela umyalelo kaMengameli Cyril Ramaphosa, wokuthi akufanele kube nomcimbi ozohlanganisa ndawonye abantu abangaphezu kuka-100.
Uthe ngokwazi ukuthi umcimbi ubuzohanjelwa yinqwaba yabantu, baqoke ukubeka ukuphepha kwabo phambili. Ngokomyalezo lesi bekungesona isinqumo esilula ukuhlehlisa umcimbi kodwa imindeni ethintekayo ibiphoqwa yisimo.
Umcimbi kuthiwa uhlehliselwe usuku olungakadalulwa, abanikazi bawo bazolinda isimo sezwe size sibuyele esimeni esijwayelekile, kunqotshwe igciwane elihlasele.
Kwenzeka lokhu nje uTshatha uyaphuphuma yinjabulo njengoba ngempelasonto edlule ebuye nezindondo ezimbili emcimbini wezindondo, amaDStv Viewers’ Choice Awards, obuseThe Dome, eGoli.
Uhlabane ngendondo yeFavourite Radio Personality ne-Ultimate Viewers Choice Award njengoba ebe ngusaziwayo ovotelwe kakhulu.
NgoLwesine ekuseni uTshatha ukhulume ohlelweni lukaDudu Khoza, iJabul’ujule, ebonga uDudu nabalaleli boKhozi FM ngokumeseka kusukela ngesikhathi kuphakanyiswa igama lakhe emcimbini.
UTshatha kubukeka sengathi uzophinda ahlabane ngezinye izindondo ezimbili njengoba uhlelo lwasekuseni, alwethula ngokuhlanganyela noNongcebo McKenzie,
Isidlo Sasekuseni luphakanyiswe emunxeni weBest Breakfast Show, kuthi alwethula ngoMgqibelo noZimiphi “Zimdollar” Biyela, iSigiya Ngengoma luphakanyiswe emunxeni weBest Music Show, kuma-2020 Radio Awards ngenyanga ezayo.
Ibamba likaMphathisiteshi woKhozi FM, uSbongi Ngcobo libhale ekhasini lalo kwiTwitter lihalalisela ithimba lezinhlelo zombili ngokuphakanyiswa kwazo emncintiswaneni omkhulu wokuklomelisa ngezindondo abasebenzi abavelele bemisakazo yakuleli.